बालेनप्रति मोहित नयाँ पुस्ता
8th June 2022, 07:12 am | २५ जेठ २०७९
वालेन्द्र साह 'बालेन' काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा निर्वाचित भएका छन्। महानगरमा खसेको कुल मतको ३२ प्रतिशत र काठमाडौं महानगरको कुल तीन लाख मतदाता संख्याको २० प्रतिशत मत पाएका बालेनले महानगरका ३२ वडामध्ये सबै भन्दा धेरै मत वडा नं ३२ मा पाए। त्यहाँ खसेको कुल मतमध्ये ४६ प्रतिशत मत उनको पक्षमा खसेको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यस्तै वडा नं ९ र ७ मा ४४ प्रतिशत मत साहको पक्षमा खसेको देखिन्छ। मतगणना हुँदै गर्दा महानगरको कोर एरिया भनिएका वडाहरुका बाकस खुल्न थालेपछि धेरैले आँकलन गरेका थिए अब बालेनलाई भोट जाँदैन। राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु पनि लगभग बालेनको पक्षमा भोट नजाने र आफ्नो भोट बढ्नेमा सुनिश्चित थिए। तर मतगणनाका नतिजाहरुले दलहरुलाई हारोन्मुख बनाइदियो। साहले महानगरबाट पाएको कुल मतको १० प्रतिशत मात्रै मत पाए पनि लहर उनकै पक्षमा देखियो। कोर एरियाबाट सबैभन्दा बढी मत १७ वडामा (२३ प्रतिशत) पाएका बालेनले सबैभन्दा थोरै मत २३ वडामा (१६ प्रतिशत) पाएका छन्। पछिल्लो जनगणना अनुसार काठमाडौं महानगरको जनसंख्या ९७५,४५३ रहेको छ। जनसंख्याको जम्मा ६.३ प्रतिशत मत पाएर वालेन्द्र साह काठमाडौं महानगरका मेयरमा निर्वाचित भएका छन्।
काठमाडौंको नतिजासँगै मेरा लागि स्थानीय चुनावको रौनक सकियो। स्थानीय अर्थात् मेरो वडाको चुनाव, मेरो नगरपालिकाको चुनाव, मेरो महानगरको चुनाव। यी बाहेक अन्य नगर र गाउँको चुनावले मलाई खासै आकर्षण गरेन। काठमाडौं महानगरको चुनावमा झण्डै पाँच दर्जन मेयरका उम्मेदवार थिए। ती मध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहे नवनिर्वाचित मेयर बालेन। उनी के हुन्, को हुन्, कस्का मान्छे हुन्? सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा कैतुहलताका साथ
निकै बहस चल्यो। उनीसम्म उठेका प्रश्न पुग्यो या पुगेन थाहा भएन तर शहरका गल्ली गल्लीका चिया चौतारो, कफी सपदेखि घरघरका बैठकहरुमा उनीमाथिका जिज्ञाशाहरु सर्वाधिक चर्चामा रहे। मेरो मनमा भने के, को र कस्का भन्दा पनि किन? भन्ने प्रश्न उठिरह्यो। किन बडे बडे दलले उठाएका बिगसट उम्मेदवार भन्दा बालेनको चर्चा बढी? किन युवाहरु माझ बालेनको क्रेज अत्यधिक? किन सुन्न सक्दैनन् बालेनका विषयमा समर्थकहरु अलिकति पनि आलोचना? आखिर के छ बालेनमा त्यस्तो?
नवनिर्वाचित काठमाडौं महानगरका मेयर वालेन्द्र मधेसी मूलका काठमाडौंबासी हुन्। उनी काठमाडौं नरदेवीमा जन्मिए, यहीँ हुर्किए, शिक्षादीक्षा हासिल गरे र दक्ष प्राविधिक बने। रहरै रहरमा संगीत क्षेत्रमा होमिए, युवामाझ चर्चित बने। यतिले मात्रै बालेन चर्चाको शिखरमा पुगेका भने होइनन्। काठमाडौंका गल्ली गल्लीसँगको उनको परिचय छ। यहाँको संस्कृति, जात्रा पर्वसँगको आत्मीय नाता, आम मानिसका रुपमा महानगरका समस्याहरुसँगको भोगाइ पनि। किनकि दुनियाँले नदेखे पनि उनी 'कोर सिटी'कै हुन्। शहरको वास्तु बुझेका स्ट्रक्चर इन्जिनियर बालेनसँग सांस्कृतिक र ऐतिहासिक शहरलाई अझ जीवन्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यस्ता विश्वास पूरा गर्न उनले केही कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका छन् केही अठोट लिएका छन्। परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वबाट वाक्कदिक्क बनेका महानगरका नागरिकको मनले बालेनका चुनावी कुरा पत्याएका छन्। त्यसैले उनलाई अत्यधिक मत दिएर महानगरको मेयर बन्ने मौका दिए। को हुन् ती मतदाता जसले बालेनलाई रोजे? वडावडामा राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई भोट दिएका मतदाताले मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई किन भोट दिए? यो कस्तो छनौट? कस्तो वितृष्णा?
'आजसम्म दलले गरे, अब बदल्नेले गरौं।' बालेनको निर्वाचन नारा। महानगरमा चलिरहेको बेथिति र यहाँका समस्याहरु बदल्न बालेनले के के रणनीति लिनेछन्? उनका मतदातामाझ यस विषय ताजा ताजै छ। निर्वाचनअघि बालेनले भनेका थिए काठमाडौं रैथानेहरुको मात्रै हैन यहाँ बसोबास गर्ने सबैको हो। तर्कमा दम छ। वास्तवमै काठमाडौं रैथानेहरुको मात्रै शहर रहेन। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका सबै जात, धर्म, लिंग, वर्गका नेपालीहरुको बसोबास रहेको काठमाडौंमा बालेन जस्ता हजारौं लाखौं जनसंख्या यहिँ जन्मेका हुर्केका छन्। जसलाई पहाड घर, मधेश घर, हिमाल घरसँग कुनै साइनो गाँस्ने रहर छैन। ती नयाँ पुस्ताका लागि यो शहर उत्तिकै आफ्नो हो जति यहाँका रैथानेहरुको। अब काठमाडौंले यस्ता नयाँ पुस्तालाई 'हामी रैथाने तिमीहरु बाहिरीया' भन्न मिल्दैन। यसपटकको स्थानीय निकायको चुनावमा काठमाडौंका रैथानेहरुको बसोबास क्षेत्र मानिने कोर सिटी - विष्णुमति पूर्व र टुकुचा पश्चिमले गेम चेन्जर क्षेत्र बन्ने छुट पाएन। मतदाता संख्या कोर सिटीभन्दा बाहिर फैलिएको हेक्का नराख्दा दलहरुको चुनावी गणित मिलेन। चुनावी गणितको यो सुत्रमा सफलता प्राप्त गरे बालेनले। त्यस्तै, अग्रजहरुको राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधि उम्मेदवारप्रतिको मोहलाई कोर सिटी भित्रका नयाँ पुस्ताले पनि साथ दिएनन्। नयाँ मतदाताले परिवारका अग्रजहरुसँग ब्यालेट विद्रोह गर्दा बालेनको उदयलाई सहज बनाइदियो। स्मार्ट फोन बोक्ने महानगरका स्मार्ट जेनेरेसनलाई केशव स्थापितको इतिहास र सिर्जना सिंहको पक्षमा गगन थापाले बाँधेका तारिफका पुलले खासै तानेन। बरु बालेनका महानगरमा गर्न सकिने विकासका एजेन्डाले आकर्षित गर्‍यो। बालेन महानगरमा समाधान नभइरहेका साना ठूला समस्याहरु कसरी सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ भन्दै कलेज कलेजमा व्याख्या गर्दै हिँडे। फोहर व्यवस्थापनका उपाय, सार्वजनिक शौचालयका उपाय, ट्राफिक जाम व्यवस्थापनका उपाय। उनका अभिव्यक्तिहरु उनका सहयोगीमार्फत् डिजिटल माध्यमबाट यसरी फैलियो कि नयाँ पुस्ता उनीप्रति मोहित बने -चास्नीको महकले माहुरी तानिए जस्तै। नयाँ पुस्ता, स्मार्ट मतदाता, नयाँले केही गर्छ भन्ने विश्वास। बालेनले जित्नुको मूल कारण यही बन्यो।
तर, अबका दिन उनका लागि चुनाव जित्न जति सहज भने छैन। योजनालाई मूर्त रुपमा अगाडि बढाउन उनीसामु चुनौतीका पहाडहरु थुप्रिन थालिसकेको छ। यतिखेर उनी फोहर व्यवस्थापनका लागि आफ्नो सबै शक्ति खर्चिरहेका छन्। राजधानीका सडकमा थुप्रिएका फोहर एकातिर छ भने मौसमी घामपानीले त्यस्तो फोहरलाई थप बिस्तार गरिरहेको छ। त्यस्तोमा उनी कहिले सिसडोल पुगिरहेका छन् त कहिले सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन्। उनको यस्तो कदमको सबैले स्वागत गरेकै छन्। तर, यसरी फोहरमा मात्र केन्द्रित भइरहँदा महानगरका अरु थुप्रै मुद्दाको चाङलाई उनले कसरी सम्हाल्लान्? फोहर व्यवस्थापनको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्लान्? प्रश्नहरुको उत्तरका लागि केही समय उनको रणनीति र कार्यनीतिको प्रतीक्षा गर्नु नै पर्नेछ। चुनावमा जित निकालेजस्तै समस्याको पनि निराकरण गर्न सके उनी निश्चित रुपमा सफल ठहरिने छन्।